गिनिज बुकमा देवदहका सुपुत्र — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » देवदह-रत्न, मुख्य समाचार → गिनिज बुकमा देवदहका सुपुत्र
May 12, 2016९२६ पटक
देवदहमा कैयौं यस्ता व्यक्ति छन्, जसले देवदह आफ्नो क्षेत्रमा रहेर पनि रास्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान बनाईसकेका छन् । तर हामी धेरै देवदहबासीहरु उहाँहरुलाई चिन्दैनौ । एउटा नयाँ कार्यको सुरुवात हामीबाटै हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले देवदहका युवा साहित्यकार विनोद उदयले देवदह साप्ताहिकमा ‘देवदह रत्न’ नामक स्तम्भ सुरु गरेका छन् ।
यो नविन कार्यलाई आत्मसात गर्दै अनलाईन पत्रिका ‘उज्यालो लाल्टिन’ मार्फत पनि देवदह रत्न स्तम्भको प्रकाशन आरम्भ गरेका छौ । देवदह रत्न स्तम्भ मार्फत ‘उज्यालो लाल्टिन’ मार्फत देवदह साप्ताहिकमा प्रकाशित लेख प्रकाशन गरिएको जानकारी गराउदछौ । प्रस्तुत छ देवदह साप्ताहिकमा २०७३ बैसाख १३ गते सोमबार प्रकाशित यो आलेख …
– विनोद उदय
अमेरिका र नेपालको समय झण्डै १२ घण्टाले फरक । उता रात यता दिन, उता दिन यता रात । समयको यो फरकले मलाई उनीसंग कुरा गर्न हम्मे हम्मे प¥योतर पनि कोसिस उनले र मैले दुवैले छोडेनौ । अन्तत हाम्रो बातचित भई छाड्यो । र मैले यो लेख्न पाँए । सोच्दै हुनुहुन्छ होला ‘उनी’ को हुन्? कुनै पनि शब्दलाई उल्टोबाट तीब्र गतिमा उच्चारण गर्ने क्षमतामा उनीभन्दा अब्बल व्यक्ति अरु कोही पनि छैन । यो जिल्लामा मात्र हैन, यो देशमा मात्र हैन, यो संसारमै छैन । यस्तो अनौठो प्रतिभामा संसारकै एक मात्र अब्बल व्यक्ति अरु कोही होइनन्, हाम्रै देवदहका सुपुत्र हुन्, कृष्ण पाण्डेय ।
सानै देखि तिक्ष्ण दिमागका कृष्ण हरेक कक्षामा र हरेक प्रतियोगितामाअघिल्लै पंक्तिमा हुन्थे । उनले आफ्नो दश जोड दुईको पढाई काठमाडौको एलआइसी कलेजमा पुरा गरे र लागे अमेरिकातिर ।
आज भन्दा २८ बर्ष अघि देवदह, शितलनगरमा जन्मेका कृष्णको बाल्यकाल अत्यन्तै सहज र हराभरा बित्यो । शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा जन्मेको हुँदा उनीसंग उल्लेख गनुपर्ने दुखका कथाहरु छैनन् । छन् त सफलताका लोभलाग्दा कथाहरु मात्र छन् । उनको प्राथमिक शिक्षा शितलनगरकै सगरमाथा आवासिय उ. मा. वि. र माध्यमिक शिक्षा भवानीपुरको महामाया भवानी उच्च मा. वि. मा पुरा भयो । सानै देखि तिक्ष्ण दिमागका कृष्ण हरेक कक्षामा र हरेक प्रतियोगितामाअघिल्लै पंक्तिमा हुन्थे । उनले आफ्नो दश जोड दुईको पढाई काठमाडौको एलआइसी कलेजमा पुरा गरे र लागे अमेरिकातिर । उनी अमेरिका उडेका हुन्, सन् २००७ मा । त्यहाँबाट उनले बिजनेसमा अन्डर ग्य्राजुएट तथा सुचना प्रविधिमा मास्टर्स गरे । हाल उनी अमेरिकाकै एउटा कम्पनीमा सुचना प्रविधि विशेषज्ञको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि शब्दलाई उल्टोबाट तिब्र गतिमा उच्चारण गरेर उनले गिनिज वल्र्ड रेकर्ड कायम गरेका हुन् । भारतका शिशिर हाथवरले एक मिनेटमा ३० वटा शब्दहरु उल्टोबाट भनेर राखेको रेकर्ड उनले एक मिनेटमा ३६ वटा शब्दहरु भनेर तोडेका हुन् । कृण्ण अहिले विश्वका एक नम्बर ‘रिभर्स स्पेलर’ हुन् ।
दुई जना आमा र एक बाबुका दश नौ जना सन्तान मध्येमाकृष्णसमग्रमा छैठौ र छोराहरुमा चौथो रोलक्रममा पर्छन् । यिनका दुई दिदि र एक बहिनी छन् । उनका पिता महामाया उ. मा. वि. का प्राचार्य थिए त्यसैले पनि होला यिनको घरेलु वातावरण नै शिक्षामैत्री र अनुशासनमैत्री थियो (अहिले पनि छ) । राम्रो संग पढेर देश, समाज र आना लागि समेत केही न केही ‘राम्रो’ र ‘ठुलो’ काम गर्नुपर्छ भन्ने उनका पिताको मार्गनिर्देशन हुन्थ्यो । त्यतिबेला कृष्णलाई थाहा थिएन त्यो ‘राम्रो’ र ‘ठुलो’ काम भनेको के हो र त्यो कस्तो हुन्छ । अन्तत उनले त्यो गरिछाडे ।
अब कुरा मोडौ उनले सफलता हासिल गरेको बिषयतिर । कुनै पनि शब्दलाई उल्टोबाट तिब्र गतिमा उच्चारण गरेर उनले गिनिज वल्र्ड रेकर्ड कायम गरेका हुन् । भारतका शिशिर हाथवरले एक मिनेटमा ३० वटा शब्दहरु उल्टोबाट भनेर राखेको रेकर्ड उनले एक मिनेटमा ३६ वटा शब्दहरु भनेर तोडेका हुन् । कृण्ण अहिले विश्वका एक नम्बर ‘रिभर्स स्पेलर’ हुन् । न्युयोर्कमा भएको एक भव्य कार्यक्रममा करिब पन्ध्र सय मानिसहरु बिच कृष्णले आफ्नो प्रतिभा देखाएका हुन् । वि. सं. २०७१ को पूर्व सन्ध्यामा लन्डन स्थित गिनिज बुकको हेडक्वार्टरले उनलाई रेकर्ड कायम गरेको ‘कन्फर्मेसन’ दिएको थियो । यसरी हाम्रै देवदहका छोराले फरक प्रतिभामा आफूलाई विश्वकै नम्बर एक बनाएर देवदहको मात्रै होइन देशकै छाती चौडा बनाइदिएका छन् । अर्को खुसीको कुरा छ, उनले अर्को नयाँ ‘टाइटल’मा विश्व किर्तिमानका लागि तयारी गरिरहेका छन् ।
“आफू भित्रको यस्तो प्रतिभा तपाईले कसरी चिन्नु भयो?” र “गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछु भनेर कहिले र कसरी सोच्नुभयो?” मैले सोधेको दुवै प्रश्नको जवाफ एउटै उत्तरमा दिदैउनले विस्तृतमै भनेका थिए, “यो क्षमता मैले कक्षा ११ मा पढ्दा थाहा पाएको थिए । घरमा भाई बैनीलाई अङ्ग्रेजीका शब्दहरु सोध्ने तथा कोठामा टाँगिएका भनाईहरु पढ्ने क्रममा केही पटक उल्टो पढ्दा सजिलो लाग्यो र आफूलाई दुवैतिरबाट स्पेलिङ भन्न सहज रहेको थाहा पाँए । अरुका बिचमा आफूलाई फरक देखाउनु र अरुको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गरी आफू चिनिन खोज्नु मेरो सानैदेखिको बानी थियो । मैले घर, आफन्त तथा साथीभाईहरुको माझमा यो प्रतिभा देखाउन थाले । त्यति खेर नै गिनिज बुकमा नाम लेखाउने सोच आएको थियो । तर कसरी, कहाँबाट सुरु गर्ने केही थाहा थिएन । दश जोड दुई सकेपछि अध्ययनकोृ लागि अमेरिका आए । यो प्रतिभालाई अगाडि बढाउछु भन्ने सोचेपनि पढाइको व्यस्तताले तालमेल मिलिरहेको थिएन । पढाई सकेर जागिर खोज्ने क्रममा मेरो अमेरिकामै बस्ने दाई पिताम्बर पाण्डेय, साथीहरु प्रविन कोइराला र मनोज खड्काको बिशेष पहलमा २०१२ को अप्रिलमा डालसमा भएको ए.एन.ए. को ३० औ सम्मेलनमा प्रर्दशन गर्ने अवसर पाँए । त्यहाँबाट यो समाचार चारैतिर फैलियो र धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाए । यसले मान्छेहरुको बिचमा लोकप्रिय बन्ने बाटो देखाउनुका साथै गिनिग बुकमा नाम लेखाउन अघि बढ्न ठुलो हौसला मिल्यो ।”
“सन्तोष पन्त दाईले भन्नु भएको थियो, ‘कृष्णजी यदि यो प्रतिभालाई अझ विस्तार गर्न सके नेपालमा आाएर नेपालको अहिलेको बिग्रेको राजनैतिक र आर्थिक परिस्थितिलाई नै उल्टो गराइदिनुस् न ।’
आफ्नो ठाउँ र आफूले पढेका विद्यालयहरुले आफूलाई चिन्नुपर्ने जति नचिनेकोमा देखेसो त हैन तर गुनासो चाहि पक्कै छ उनीसंग । “मलाई चिनुन्, मलाई सम्मान गरुन् भन्ने त लाग्दैन” उनले अगाडि भने “तर मेरो प्रतिभाको उचित प्रचार गर्न सकियो भने भाईबैनी पुस्ताहरु चाँहि पक्कै पनि उत्प्रेरित हुनेथिए ।” वास्तवमा उनले भनेझै उनको सफलताले हामी सबैलाई क्षमता र प्रतिभाका विभिन्न आयामहरुको खोजी गर्न उत्साहित बनाएको छ, उक्साएको छ । यसर्थ उनी हाम्रा गौरवका बिषय त हुदै हुन् अझ बढी प्रेरणाका स्रोत पनि हुन् । बिशेषगरी नयाँ पुस्ताका लागि । उनी एसोसिएसन अफ नेप्लिज ईन अमोरिका (ए.एन.ए)द्धारा ‘हिरो अफ दि इयर २०१४’, युएस नेपाली मिडिया सेन्टरबाट‘युथ रिकग्निसन अवार्ड’लगायत सम्मानबाट तथा अन्य विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट सम्मानित भईसकेका छन् । उनलाई अहिले पनि अमेरिका, नेपाल तथा अन्य देशहरुबाट प्रतिभा प्रर्दशन र सम्मानका लागि निमन्त्रणाहरु आईनैरहन्छन् ।
उनी अहिले पनि अमेरिकाका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमहरुमा हिडिरहन्छन् । तर जहाँ जाँदा पनि ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्’ र ‘नेपाल सगरमाथाको देश हो’ लेखिएको ब्यानर बोकेरै पुग्छन् । गिनिज बुकमा नाम लेखाउने आधिकारिक कार्यक्रममा पनि उनले ति ब्यानरहरु अगाडि टाँगेकै थिए । उनी भन्छन्, “हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकेको र जानेको गर्ने हो, अरुले गरेनन् भनेर गुनासो गरेर बस्ने होइन ।” उनलाई आफ्नो जन्म ठाउँको लागि पनि केही गर्ने रहर छ । कस्तो योजना रहेछ भनेर मैले बुझ्न खोजे, “अहिले बोल्नुभन्दा एकै पटक कामै गरेर देखाउँदा राम्रो हुन्छ” उनले आत्मविश्वासी लवजमा भने । उनले एउटा कार्यक्रममा भएकोचर्चित कलाकार सन्तोष पन्त र आफू बिचको संवाद सम्झे । “सन्तोष पन्त दाईले भन्नु भएको थियो, ‘कृष्णजी यदि यो प्रतिभालाई अझ विस्तार गर्न सके नेपालमा आाएर नेपालको अहिलेको बिग्रेको राजनैतिक र आर्थिक परिस्थितिलाई नै उल्टो गराइदिनुस् न ।’ मैले हाँस्दै भनेको थिँए, सोचेजस्तो भए कुनै दिन यस कुरामा पनि प्रयास गर्नेछु ।” साँच्चै कृष्णजी तपाईको मुखमा दुध र भात जाओस् ।
उनले आफ्नो सफलताको सम्पुर्ण श्रेय आफ्नो परिवारलाई दिन्छन् । भन्छन्, “घरमा पाएको संस्कार, पढ्ने वातावरण र केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणाले यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । अझ धेरै गर्नुछ ।”साँच्चिकै पढाईमा मात्रै तेज थिएनन् उनी, उत्तिकै अनुशासित, उत्तिकै नम्र र सबैका प्रिय थिए र अहिले पनि छन् । उनी मात्रै होइन उनको परिवारका सबैजना उस्तै छन्, तेज, उत्साही, अनुशासित र स्वप्नद्रष्टा । मान्छेले कसरी आफुभित्रको क्षमतालाई चिन्नुपर्छ भनेर उनले सबैलाई सिकाएका छन् । हुन पनि हो सबैभित्र केही न केही क्षमता र प्रतिभा हुन्छ, चिन्नेले सफलता पाउँछ, नचिन्ने त्यसै हराएर जान्छ । हामीले पनि उनले जस्तै आफूभित्रको क्षमतालाई चिन्ने कि?